Ku Dhaqan Qodobadan Si Ay Ku Jeclaadaan Bulshadaad La Nooshahay - Haldoornews
Ku Dhaqan Qodobadan Si Ay Ku Jeclaadaan Bulshadaad La Nooshahay
Inta badan dadku waxeey ka fikiraan sidey kuu jeclaanayaan dadka kale ama ad u noqon karta qof la qiimeyo dadka dhexdooda hadaba jawaabta wa marka hore adigu jeclaw naftada dadka kalena way ku jecelanyaan.
Waa xaqiiq la ogaday hadii ad is qadarisid dadka kalena way ku qadarinayaa.
Hadab sideed isku jecelan kartaa ?
Inad naftad jecelato waxay rabta inad inbadan ku tababartid qodobada an hoos ku shegi dona .
1: Ogolow naftada sida ay tahay, qof walbo adunkan ku nool wuxu leyahy wax ku ficanyahay iyo wax uu ku xun yahay, naftada ha ku qiimeyn inta xun ku qimee mar walba dhanka inta fican.
2: Jooji inad ceebaysid naftada, dad badan aya waxay mar walba naftood ku canantan hal khalad oy sameyeen inbadan ka fikira khaladkas , jooji arintan kuna faan waxa fiican ed samesay iyo wax fiican eed haysato markas.
3: Ha murugoon, mar walba ood murugootid waxa yaranaysa inta ad naftada xiisenayso ama ad jeceshahy.
4: Cadee waxad taqano, isku day inad kor uqadid waxad ad taqanid waxa markas badnanysa inta ad naftada ku kalsontahay .
5: Muqaalkada qurxi, hadii uu jidhkadu qabo wax liidasho ah wa inad kor u qada ood muqaalkaga sare quruxisa si ad naftada u jecelatid mar walba ood is eegtid.
6: Xiisee nolosha, isku day inad mar walba la socotid dadka oonad daremin inad kalitahay ka qayb qaado shaqooyinka dadku qabtaan tag melaha ay dadka ku ciyaran ama loo dalxiis tago , waxa soo baxaysa inad dadka la simantahay tahayna qof isku kalsoon.
7: Ogow fikirka ay naftadu qabto, tag mel cidlo ah oo fadhiiso indhahaan isku qabo la shekeso naftada si ad u ogatid waxa ay qabto naftadu wax hubal in ad adiga iyo naftad hishiis noqonaysan kabacdi ad jecelanayso naftada .
Waxan rajenaya inad qodobada sifican u fahanten , kaliya wax la raba inad sameeyso qodobada mar walba ad naftada bartid sidan xaqiiqdi waxad arkaysa adoo naftada jeceladay dadka kalena kujecel yihiiin .
MAAHMAAHYO IYO HALQABSIYO AY BULSHOOYIN KALA DUWANI KA YIDHAAHDEEN DUMARKA
Halkan Ka Akhri 7 Qodob oo Ka Hadlaya Faa’iidada Malabku Leeyahay